सावधान, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र ! ~ Thinksphere
एक, बस रोकिएको ठाउँमा बस मात्र थिएन, बसजत्तिकै अग्लो फोहोरको डंगुर थियो । चर्को गन्धले नाक मात्र होइन, मस्तिष्कमा सोझो आक्रमण गर्‍यो । झ्यालढोका लगाउँदा भित्र हपहपी हुने । खोलौँ, सिंगो काठमाडौं फतफती कुहिएको अनुभूति हुने । दुई, केही दिनअगावै फोनमा बुक गराएर समयमै ओगटिसकेको मेरो सिटमा अर्का यात्रुलेआफ्नो दाबी तेर्स्याए ।
उनको टिकटमा लेखिएको त्यही सिटको बेहोरा देखाए । चालक र सहचालकलाई गुनासो गरेँ । यात्रुका गाली प्रभावहीन हुने गरी बाक्लिएका तिनका छालामा मैले उठाएका थिति र नियमका प्रश्न ठोक्किँदै अन्यत्र कतै हुत्तिए । हात लाग्यो, पूर्ण बेवास्ता । हामी दुई निरीह यात्रुले आपसमा सहमति गरेर आफ्ना सिट मिलायौँ ।
तोकिएको समयभन्दा लगभग डेढ घण्टापछि हामीलाई गुडाइयो । गुडेको केही बेरसम्म सहचालकले सिट भर्ने यत्न छोडेनन् । झोला बोकेर सडक किनारमा उभिएका प्रत्येकलाई ‘कहाँ जाने ?’ भनिरहे । ढोकामा उभिएका उनी र गाडी चलाइरहेका चालकबीच हिजोदेखिका हिसाब–किताबको संवाद निरन्तर चल्यो । भक्तपुरतिरबाट चढ्ने यात्रुका फोन पनि चालकले नै उठाइरहे । धुलिखेल कटेपछि मात्र उनीहरूको हल्ला केही कम भयो ।
तर भन्ज्याङ कटेर नागबेली बाटामा गाडी बत्त्याउन थालेका उनलाई घरीघरी फोनआइरह्यो । कहिले जग्गा र गाडीको भाउवाला फोन आयो । कहिले रक्सी कतिसम्म खान हुने र खाएर के–केसम्म गर्न हुने भन्नेबारे फोनमै व्याख्या चल्यो । एउटा फोन राखेको दस मिनेट बित्न नपाउँदै उनी अरू कसैलाई फोन गरेर भोलि फर्किने यात्रुका बुकिङ सम्झाउँथे । त्यो फोन राखेको केही मिनेटमै उनको चर्को रिङटोन बजिहाल्थ्यो । एक हातले गाडी नागबेली पाराले बत्त्याएका छन्, फोन संवाद अटुट जारी राखेका छन् । ‘निष्ठुरी प्रेमिकाको नाममा विष खाने धम्की’ सहितका चर्का गीत बजिरहेकै छन्, फोन संवाद चलिरहेकै छ ।
कुन बेला कति अग्लो भीरबाट यात्रुसहितको बसलाई तल कतै नदेखिने ठाउँमा बजार्ने हो भनेर कल्पना गर्नु भनेको आफैलाई सास्ती दिनु हो । यद्यपि कल्पना यथार्थमा बदलिसक्दा, त्यसको लेखाजोखा गर्ने समय नै पाइँदैन । कानमा फोन टाँसेर एक हातले गाडी चलाउनु राम्रो होइन भनेर सम्झाउन खोज्दा उल्टै खप्की खाएका पुराना सम्झना अझै गाढा छँदै छन् ।
प्रहरी गुहार्दासमेत समस्या सुल्झिनेभन्दा बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । क्षुब्ध चालकले अक्करिला भीरमा चलाएको गाडीमा चढ्न झन् ठूलो सास्ती हुन्छ । साथमा रहेको उपन्यासमा बलजफ्ती भए पनि आँखा डुलाउन थाल्दा केही राहत मिल्यो । कथामा वर्णित मृत्युका रहस्यले आफ्नै आसन्न मृत्युको कल्पनालाई पर धकेल्यो ।
खाना र शौचका लागि रोकिएका ठाउँका कहर दोहोर्‍याउनुको अर्थ छैन । महँगो मोल तिरेर खानुपर्ने खाइनसक्नु खाना, संक्रमणको डर मनमै दबाएर प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालय, अनि विकल्पहीन बनेर बेहोर्नुपरेका यस्ता अनगिन्ती बाध्यता कुनै नयाँ यथार्थ होइनन् । धेरैजसो तोकिएको गन्तव्यमा समेत नपुर्‍याई झोलीतुम्बी घिसार्दै अर्को गाडी चढ्नुपर्ने बनाइदिन्छन्, यस्ता माइक्रो बसले । काँकरभिट्टा पुर्‍याउँछु भनेर वाचा गरेका बसले सत्र किलोमिटर यतैको बिर्तामोडमा गाडी परिवर्तन गराउने घटना अनौठो हुन छोडेको छ । गुनासो कतै सुनुवाइ नभएपछि दोहोर्‍याउनुको कुनै तुक छैन ।
प्रत्येक पटक लामो दूरीको सडक यात्रा गर्दा ‘दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र’ लेखिएका साइनबोर्डको संख्या बढेको देख्छु । पहिले त्यस्ता साइनबोर्ड नराखेका घुम्तीमा यस पटक थपिएको देखेँ । धेरै दुर्घटना भएको ठाउँ भनेर यात्रु एवं चालकलाई जनाउ दिन राखिएको बोर्डमा लेखिएका वाक्य हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ भर्खरै त्यो क्षेत्र स्वयं दुर्घटनामा परेको हो । साइनबोर्डले मात्र नपुगेर आजकल दुर्घटनाले जीर्ण मोटरसाइकलको भान दिने कंकालसमेत बोर्डमाथि राख्न थालिएको छ ।
दुर्घटित बाइकसहितको साइनबोर्डले मेरो मस्तिष्कमा प्रभावकारी ढंगले भय सम्प्रेषण गर्छ । हिँडिरहेको सडक हदै असुरक्षित छ भन्ने महसुस गराउँछ । सुरक्षित हुन चाहेर यसो चालकतर्फ हेर्‍यो, रजनीगन्धा चपाउँदै ऊ फोनमा एकोहोरो बोलिरहेको छ । चर्को गीतको हैरानी सबै यात्रुलाई समानुपातिक वितरण गरेर काम फत्ते गरेको सहचालक ढोकाछेउ मुडामा उँघिरहेको देखिन्छ ।
यस्ता कथा सुनाइसक्दा साथी र आफन्त भन्छन्, ‘हवाई यात्रा गर्नु नि, एकै छिनमा पुगिन्छ, यत्रो सास्ती हुँदैन ।’ तर हवाई यात्राले उमार्ने ‘बेताबी’ कम छैनन् । सिंगो उड्डयन क्षेत्रले बेहोरेका एकपछि अर्का संकट, दोहोरिरहने भ्रष्टाचारका कथा, अव्यवस्थाबाट सिर्जित दुःखद खबरले ढुक्क बन्न दिँदैन । समयको बचत हुन्छ भन्ने तर्कलाई आफ्ना सबै अनुभवले खारेज गरिदिन्छन् ।
अक्सर ट्राफिक जाम भइरहने काठमाडौंको आकाश र अन्य धेरै कारणले पैँतालीस मिनेटको उडानका लागि चार–पाँच घण्टा खेर फालेका उदाहरण कति छन् कति ! आफूलाई बोक्नुपर्ने जहाजले माउन्टेन फ्लाइट गरेको वा अरू नै ठाउँतर्फ हान्निएका गफ कति सुनियो, गनेर साध्य छैन । एयरपोर्टका महँगा क्यान्टिन, असहयोगी कर्मचारी एवं पेसागत इमानदारी र नम्रता कति पनि नभएका सरकारी र निजी हवाई कम्पनीका कर्मचारीबारे केही भनिरहनुपर्छ र !
सडक होस् वा आकाश, नेपालमा ढुक्कसँग यात्रा गर्न सकिँदैन । दुर्घटना नभई गन्तव्यमा पुगेको यात्रुले खुइय्य गर्दै भन्छ, ‘बाँचेर
आइयो !’ । धर्मभीरु बा–आमाले प्रत्येक पटक लामो दूरी गर्दा आफ्ना सन्तानको सुरक्षित यात्राको कामना गरेर डराउँदै निधारमा टीका टाँसिदिन्छन् । कारण, हाम्रा सडक र आकाशमा दुर्घटना हुनुपर्ने प्रशस्त कारण छन् ।
सडकको बनावट स्वयं एउटा कारण हुन सक्छ, चालकको लापरबाही, सम्बन्धित कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी, ट्राफिक प्रहरीको हेलचेक्र्याइँ, नाफा दोहनबाहेक केही नदेख्ने व्यवसायीको बेवास्ता । यी र यस्ता अरू कारणबारे थाहा नपाएका मान्छे कमै छन् । यातायात व्यवसायी जान्दछन्, मजदुरहरू जानकार छन्, सम्बन्धित मन्त्रालय बेखबर छैन, राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको छैन, सामान्य यात्रुले आफ्ना कथा लेखेर यस्ता सयौँ पाना भरिदिन सक्छन् । यीमध्ये समस्या सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने कसले हो ? स्पष्ट योजना र जिम्मेवारी बोधसहित तुरुन्त काम थाल्नुपर्ने कसले हो ?
लामो राजनीतिक संक्रमणपछि क्रान्ति र आन्दोलन सकिएको उद्घोषसहित बनेका सरकारहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । प्राथमिकता पहिल्याउन नचाहेका तिनले ‘दुर्घटनाग्रस्तक्षेत्र’ अंकित यामानको साइनबोर्ड सिंगो देशका अघिल्तिर झुन्ड्याएर विकासका बेतुक गफ गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ०८:०१
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित / https://ekantipur.com/opinion/2019/08/02/15647122076443507.html